ကလိုစေးထူး: တံတားပေါ်က အတွေး...
Feb 23, 2009, 11:03:00 PM
အယ်...ကော့မန့်ပေးတာ တက်လား မတက်လားလည်းမတွေ့ရ ။
Feb 23, 2009, 11:13:00 PM
good thinking. awesome!
တံတားဆောက်တဲ့နေရာမှာ ငွေလဲမထည့်၊ မြေလည်းမဖို့၊ သံလည်းမရိုက်၊ ဘာတခုမှ မပါဝင်ဘဲ နေသူများက တံတားဆောက်နေသူများကို “ဒီကောင်တွေက အားအားယားယား လုပ်နေတာပါကွာ”လို့ ပြောဆိုသူများ၊ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့် တံတားဆောက်မပြီးစီး၊ မအောင်မြင်သေးခင်မှာလည်း “ဒီကောင်တွေ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ လုံးဝနည်းလမ်းမကျဘူးကွာ”၊ “အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကို မရွေးချယ်ဘူးကွာ”၊ “ပါးပါးနပ်နပ် မဆောက်ကြဘူးကွာ” စသဖြင့် ဘေးကနေ ဆင်ခြေဆင်လက်နဲ့ ဝေဖန်နေသူများသာ များနေရင်တော့ အဲသည်တံတားပြီးဘို့က တော်တော်ကြာပါလိမ့်မယ်။
တခါ တံတားဆောက်ရာမှာလည်း….. အခုလေးတင် လက်သမားတယောက် လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းအရေးအတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုရာမှာ ဘာသာပြန်တယောက်အနေနဲ့ ကူညီခိုးချပေးခဲ့တဲ့သူက ခဏကြာတော့ လက်သမားတွေ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘုရားတကာ လေသံဖမ်းပြီး “အရက်သောက်တာဟာ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်” စသဖြင့် ရှေ့နောက်မညီ ပြောတာခြင်းမျိုးတွေဟာ လုပ်ကိုင်နေကြသူအချင်းချင်းကြားမှာ တွေ့ရရင် နှုတ်ပိတ်မနေဘဲ ဝေဖန်ထောက်ပြသင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုရဲ့ စကားတခုကို ကိုးကားချင်ပါတယ်။ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်ငါးဆယ် အထိမ်းအမှတ် မဂ္ဂဇင်းမှာ ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။ စကားလုံးအတိအကျတော့မမှတ်မိပါ။)
“နိုင်ငံရေးဟူသည် နိုင်ငံသားအားလုံးအရေးဖြစ်၍ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြရမည်မှာလည်း နိုင်ငံသားအားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေသူသည် သူ့တာဝန်သူ ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေရုံမျှ ဖြစ်သဖြင့် အထူးတလည်း ကျေးဇူးတင်ခံထိုက်စရာမလို။ နိုင်ငံရေးကို အလျှင်းမလုပ်သူများသည်ကား ပြည်လှေးပြည်မွှားများသာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးကို ကိုယ်တိုင်မလုပ်ရုံမျှမက လုပ်နေသူများကိုပါ မလုပ်အောင် ကဖျက်ယဖျက် လိုက်လံနှောက်ယှက်နေသူများသည် တိုင်းပြည်ရန်သူ နံပါတ်(၁) များပင် ဖြစ်သည်”…..တဲ့။
ကျနော်တို့ ဝေဖန်နေသမျှဟာ ပြည်လှေးပြည်မွှားတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ရန်သူနံပါတ်(၁) တွေကို ဝေဖန်နေတာပါဗျိုး။ ဒါပေမယ့် တံတားဆောက်နေဆဲလူတွေကတော့ ဘယ်လိုအခက်အခဲနဲ့ ကြုံကြုံ ဆက်လက်ဆောက်သွားသင့်ပါတယ်။
Feb 23, 2009, 11:24:00 PM
anonymous ,wai ကျေးဇူးပါပဲ။ မောင်မျိုးရေ၊ မောင်မျိုးရေးတဲ့ ကွန်မန့်တခု အကို တင်လိုက်တာပဲ။ တက်မလာဘဲ ဘယ်ပျောက်သွားတယ် မသိဘူး။ ပြန်ရှာလို့လဲ မရဘူး။ ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ။ :D
ကိုပေါရေ...၊ အဲဒီမှတ်ချက်ကတော့ ကျနော့်ကို အပြုသဘောဆောင် ထောက်ပြချက် ဟုတ်ဟန်မပေါ်တော့ဘူးလို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီကိစ္စအတွက် ကိုပေါနဲ့တကွ ကိုပေါနဲ့အတူ တခြားသူတွေ ထောက်ပြခဲ့စဉ်အခါ ကျနော့်အမှားကျနော် ၀န်ခံခဲ့ပြီးသလို နောက်နောင်အဲဒီကူညီမှုမျိုးတွေမှာ အဲဒီလိုပုံစံကူညီတာထက် သွားမဖြေခင် သူတို့ကို ကျေလည်အောင် သေချာ ရှင်းပြတဲ့နည်းကို လက်တွေ့လဲ အပြင်မှာ ကျနော် သုံးနေပါတယ်။ ကျနော် အမှားမကင်းပါဘူး။ ဒါကို ထောက်ပြသွားကြတာကိုလဲ ကျနော် မျက်စိစုံမှိတ်ငြင်းခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုပေါအဲဒီကိစ္စပြောတုန်းကပြောသလို ကျနော်ကလဲ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျနော်အဲဒီနည်း သုံးတာ မှားပါတယ်ပြောခဲ့ပြီးသားမို့ ဒါဟာ ပြန်ပြီးကောက်ကြောင်းလိုက် အစဖော်နေရမယ့် ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အရက်သောက်မောင်းတဲ့ ပို့စ်ကိစ္စကိုလဲ ကျနော်က ဘုရားဒကာလေသံဖမ်းပါတယ်လို့ ကိုပေါ ထင်တာကလဲ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ တကယ်တမ်းက ကျနော် အဲဒီမေးလ်ကို ဖတ်ရတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က shock ရသွားတယ်။ ဒါကြောင့် တင်ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ ကိုပေါ အခုပြောတာက ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့အဆင့်ကို ကျော်လွန်သွားတာကို သတိထားပါဦး။
Feb 23, 2009, 11:39:00 PM
သြော် ... ကိုပေါ ကိုပေါ ...
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခင်ဗျားလဲ အတွင်း အဇ္ဈတ္တကို မဖုံးနိုင် မဖိနိုင်အောင် ဖြစ်နေပါပကောလား။
ခင်ဗျား ကြည့်ရတာ ကလိုစေးထူးကို တော်တော်လေး မနာလို မရှုစိမ့် ဖြစ်နေပုံပဲ။ ကလိုစေးထူး ပို့စ်တခုတင်လိုက်တိုင်း အပြုသဘောနဲ့ ဝေဖန်တာထက် အပြစ်တင်တဲ့ ရှုထောင့်ကနေ လိုက်လိုက် ထောက်နေတာ ဘာတွေများ ရန်ညိုးရန်စ ရှိနေလို့လဲ။
ငါပြိုင်ပွဲပို့စ်မှာလဲ ခင်ဗျားနဲ့ ခင်ဗျားနောက်လိုက် မျိုးမြင့်မောင်တို့ စာဖတ်သူတွေ မျက်စိနောက်အောင် လုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်။
ခုလဲ ဒီပို့စ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ ဘုရားတကာလေသံဖမ်းတယ် တို့ ရှေ့နောက်မညီ ပြောတယ်တို့ ခင်ဗျား ဆွဲထည့်ပြန်ပြီ။
ရိုးသားမှု မရှိတဲ့ ခင်ဗျားဝေဖန်ချက်တွေ ဖတ်ရတာ တော်တော် ကျက်သရေတုံးတယ်။
အေး .. ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုပြောတဲ့ ပြည်လှေးပြည်မွှားကိုတော့ ကျုပ် မကိုးကားဘူး။ ကျုပ်ပြောချင်တဲ့ ပြည်လှေးပြည်မွှား ရန်သူနံပါတ် ၁ က ခင်ဗျားလို အပြောကြီးပြီး ပါးစပ်အီးပေါက်တတ်တဲ့ လူစားမျိုးပဲ။
>>> ကိုစေးထူး ……….. ဆောရီးပဲဗျိုး။ ကိုစေးထူး နောက်ဆက်တွဲမှာ တောင်းပန်ထားတာကို ကျနော်မျက်စီသျှမ်းသွားတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကလိလိုက်တာ ကျနော့်အမှားပါ။ အဲဒီအတွက် ကိုစေးထူးကိုလည်း ပြန်လည် တောင်းပန်ပါတယ်။
နောက်တခုက အဲသည်လို ၀န်ခံထားတဲ့အတွက် ချီးကျုးပါတယ်။
Feb 23, 2009, 11:54:00 PM
ရှေ့က တံတား ဆောက်ပြနေတဲ့သူတွေက “ငါဆောက်နေတာကွ ၊ပင်ပန်းနေတယ် ၊ ငါတို့ပြောတာ နားထောင် ၊ ပါးရိုက်လိုက်လို့ နားကိုက်သွားမယ် ” အဲ့လို အာကြမ်း လျှာကြမ်းကြီးတွေဆိုတော့ ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ချင်တယ်လေဗျား)
တံတားကို ချွေးတွေ သွေးတွေနဲ့ဆောက်ခဲ့ကြ ဆောက်နေဆဲ သံဆူး ဖုတ်လူးနေတဲ့သူတွေကိုတော့ အဆင်လေးစားလျှက် ။
အားဝင်ချောင်တာပါ တံတားဝင်ဆောက်ရဲလောက်တဲ့ သတ္တိမရှိပါဘူး လုပ်အားပေးဖို့ထပ် အိမ်မှာ စားစရာမရှိတော့ တစ်ခြားရွာမှာ ပန်းရံ ဆင်းနေပါတယ် :P
Feb 24, 2009, 12:15:00 AM
အကိုစေးထူးရေ ဖတ်သွားပြီး ပြန်မလို့ပဲ ကောမန့်လေးတွေ ဖတ်ပြီး ရေးချင်စိတ်ကလေး ထိန်းမရလို့ပါနော့်။ တံတားလေးကို စိတ်ထဲက ပဋိပက္ခတွေကို ဖယ်ထုတ်လို့ ဆောက်လုပ်သွားရင်ပြီးရင်တောင်မှ ရေရှည်တည်တံ့ဖို့တော့ ထိန်းသိမ်းရဦးမှာပါ။ ထိန်းသိမ်းဖို့ တံတားစောင့် ကောင်းကောင်းလိုတာတော့ အမှန်ပဲနော့်
Feb 24, 2009, 12:50:00 AM
Feb 24, 2009, 2:06:00 AM
အားလုံးသော bloggers နဲ့ blogger ဖတ်မိတ်ဆွေ
တွေပြောချင်တာအဲဒီ point ပါဘဲ..ကျေးဇူးပါကိုစေးထူး..
Feb 24, 2009, 2:21:00 AM
Feb 24, 2009, 3:10:00 AM
ဒါကြောင့်တပ်မတော်က တာဝန်ယူထိမ်းသိမ်းလိုက်ရတာပေါ့ကွာ ။ မင်းတို့ တွေကြောင့် အခြေအနေတွေအားလုံးယိမ်းယိုင်ကုန်ပြီ ။
Feb 24, 2009, 6:10:00 AM
ကိုပေါရေ...ရပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်ပြန်ရေးထားတဲ့ နောက်ဆက်တွဲပို့စ်ကို ကိုပေါမမြင်လိုက်လို့ ဖြစ်ရတာပါ။ မောင်မျိုး...၊ ဒီတခါတော့ ကွန်မန့်မပျောက်တော့ဘူးကွ။ :D
တောင်ပေါ်သား...၊ ဟုတ်တာပေါ့ ညီရာ။ sindarlar ...၊ မကြာမီလာမည်...မျှော်။ :P
မမနော်ဟရီ...၊ အခုလဲ ရွာနှစ်ရှာ တံတားဆောက်ကြမှာလေ ဟဲဟဲ။
ဟိုအမည်မဲ့ ကွန်မန့်ကို ဖတ်ရတာကတော့ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်း ကြည့်နေတုန်း `တပ်မတော်ကြီးလဲ ချီလာပါပြီ၊ အောင်တပ်မတော်ကြီးလဲ ချီလာပါပြီ´ ဆိုပြီး ဗြုန်းဆို စစ်ချီသီချင်း ကြော်ငြာဝင်လာတာနဲ့ တူနေတယ်။ :D
ကလိုရေ.... အသိုက်ပြောင်းနေလို့ ခုမှရောက်ဖြစ်တယ်ဗျ။ မဖတ်ရသေးတာ တချို့ဖတ်သွားလေရဲ့။ ကျန်တာတွေတော့ နောက်မှ :)
Feb 24, 2009, 8:48:00 AM
ကိုစေထူး ကျွန်တော် ကြော်ငြာဝင်လို့ ရမလားဗျ ... :P
Feb 24, 2009, 9:28:00 AM
ဟုတ်တာပေါ့။ တပ်မတော်က တကယ်ကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းလိုက်တာ။ ချောင်းထိပ်ကနေပြီး ဆည်တစ်ခုဆောက်လိုက်တယ်လေ။ ချောင်းထဲရေမရှိတော့ တံတားဆောက်စရာ ဘယ်လိုတော့မှာလဲ။ အခုတော့ ချောင်းကောလို့ နှစ်ရွာလုံး ရေရှားပြီး ဒုက္ခနေကြပြီလေ။ တပ်မတော်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကတော့ ဆည်ရေတွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး သောက်နေကြလေရဲ့။
တောမှာ အဲဒီဆည်ရေတွေပဲ သောက်နေကြတာ မင်းမှ မသိပဲကိုးကွ.. မျုိးမြင့်မောင်ရ..ဆည်ရှိတော့ နွေမှာ ချောင်းရေခန်းရင် ရေမပူရတော့ဘူး ။
Feb 24, 2009, 2:01:00 PM
ထိုင်းနယ်စပ်မှာခင်ဗျားတို့ အင်အားနဲ့ စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့ တပ်မတော်ဖွဲ့လို့ရပါတယ်
ဘလော့ထဲမှာ မြဝတီမင်းကြီးဦးစ ရှုံးလောက်အောင်
Feb 25, 2009, 10:56:00 AM
အောင်ကိုကိုထိုက်ပြောတာမှန်တယ် ။ ထောက်ခံတယ်ဟေ့ ...ဒီကောင်တွေက တတိယနိုင်ငံ အရသာကို မစွန့်နိုင်တော့ဘူးလေ ။မောင်ကျန် တတို့ တတို့ ဖြစ်နေကြပြီ ဗျ ။ ဘလော့ပေါ်မှာက အေးဆေးပဲလေဗျာ ။ အရေးကောင်းရင်ကောင်းသလောက် ထင်ပေါ်တယ် ။ မျိုးချစ်ကြီးပါလားဆိုပြီး လူထင်ကြီးခံရတယ် ။ ဒါပါပဲ ။ အဝေးရောက်အွန်လိုင်းတော်လှန်ရေးသမားတွေပေါ့ဗျာ ။
Feb 25, 2009, 12:41:00 PM